Faah faahin:- Weerar qorsheysan oo caawa ka dhacay isgoyska suuqa Bakaaraha ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar qorsheysan oo caawa ka dhacay isgoyska suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caawa lagu dilay Isgoyska suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, iyadoona sidoo kale mid kale la dhaawacay.
Koox la sheegay inay hubeysnaayeen ayaa caawa rasaas ooda kaga qaaday labadaasi askari xilli ay ku sugnaayeen Isgoyska suuqa Bakaaraha, waxaana mid ka mid ah labadaasi askari soo gaaray dhaawac culus, halka midka kalena uu geeriyooday.
Dad goob-joogayaal oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u sheegay in kooxihii dilka geystay ay goobta isaga baxsadeen, waxaana goobtaasi markii dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgal baaritaano ah halkaasi ka sameeyay.
Ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan dilka iyo dhaawaca ka dhacay Isgoyska suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeysay weeraro qorsheysan oo intooda badan ka dhacay suuqa Bakaaraha iyo agagaarkiisa lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.